“Crazy Rich Asians”ရဲ့ အောင်မြင်ချက်ကြီးက ကြောက်ခမန်းလိလိ…. 😮 – Trend.com.mm
“Crazy Rich Asians”ရဲ့ အောင်မြင်ချက်ကြီးက ကြောက်ခမန်းလိလိ…. 😮
Posted on September 5, 2018 by Noel
“Crazy Rich Asians” ရဲ့နာမည်ကြီးချက်က သွားကြည့်ရမလိုတောင်ဖြစ်နေပြီ…သိပ်မကြာခင်က ရုံတင်ပြသခဲ့တဲ့“Crazy Rich Asians” ရဲ့ အောင်မြင်မှုစံနှုန်းက ကြောက်ခမန်းလိလိပါပဲ။ဒါရိုက်တာ Jon M.Chu ရိုက်ကူးတဲ့ “Crazy Rich Asians” ဇာတ်ကားဟာ ၂၀၀၉ခုနှစ်တုန်းကအကြီးအကျယ်အောင်မြင်ခဲ့တဲ့ “The Proposal” ဇာတ်ကားပြီးရင် အအောင်မြင်ဆုံး အချစ်ဟာသဇာတ်ကားအဖြစ်စံချိန်တင်ခဲ့တယ်လို့တောင်သိရပါတယ်။
“The Proposal” ဇာတ်ကားဟာ Sandra Bullock နဲ့ Ryan Reynolds တို့ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပြီး အဲ့ဒီအချိန်တုန်းက အမေရိကန်မြောက်ပိုင်းတစ်ခွင်ကြည့်ရှုမှုအများဆုံးဇာတ်ကားဖြစ်ခဲ့တာပါ။အခု “Crazy Rich Asians” ဟာလည်း ၉နှစ်ကျော်အတွင်း The Proposal ဇာတ်ကားပြီးရင် ဒုတိယရုံဝင်မှုအများဆုံးဇာတ်ကားတစ်ကားဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။
“Crazy Rich Asians”ဇာတ်ကားဟာ ပထမတစ်ပတ်အတွင်းမှာတင် ဒေါ်လာ သန်း ၃၀ ၀င်ငွေရရှိခဲ့ပြီး အခုလက်ရှိအချိန်ထိ ၀င်ငွေ ဒေါ်လာ ၁၃၇သန်းကျော်ရရှိနေပါတယ်။ဒီဇာတ်ကားမှာ အမေရိကန်မင်းသမီး Constance Wu နဲ့ မလေးရှားမင်းသား Henry Golding တို့ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပြီးအာရှနဲ့အမေရိကန်တွဲဖက်ရိုက်ကူးတာဟာ ၁၉၉၃ The Joy Luck Club ဇာတ်ကားပြီးရင် ဒါက ပထမဆုံးဇာတ်ကားဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။
ဇာတ်လမ်းပုံစံကတော့ ပရိသတ်တွေသိထားပြီးဖြစ်တဲ့အတိုင်း စင်္ကာပူနိုင်ငံရဲ့ အချမ်းသာဆုံးမိသားစုကနေပေါက်ဖွားလာတဲ့ကောင်လေးနဲ့ ချစ်သူဖြစ်သွားတဲ့တရုတ်အမေရိကန်အမျိုးသမီးလေးတုိ့အကြောင်း အဓိက ပုံဖော်ရိုက်ကူးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပေါ့ပေါ့ပါးပါးအချစ်ဟာသလေးကိုမှ ပရိသတ်တွေအမြင်မရိုးအောင် ဇာတ်လမ်းဇာတ်ကွက်ဆန်းဆန်းလေးတွေ၊အရမ်းမိုက်တဲ့အခမ်းအနားအပြင်အဆင်တွေနဲ့ ဆွဲဆောင်သွားတဲ့ဇာတ်ကားလေးဖြစ်သလို အခုချိန်မှာတော့ ဒီဇာတ်ကားရဲ့ ဝင်ငွေဟာ တရှိန်ထိုးကို ထိုးတက်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။Congratulations! 🎉
“Crazy Rich Asians” ရဲ့နာမညျကွီးခကျြက သှားကွညျ့ရမလိုတောငျဖွဈနပွေီ…သိပျမကွာခငျက ရုံတငျပွသခဲ့တဲ့“Crazy Rich Asians” ရဲ့ အောငျမွငျမှုစံနှုနျးက ကွောကျခမနျးလိလိပါပဲ။ဒါရိုကျတာ Jon M.Chu ရိုကျကူးတဲ့ “Crazy Rich Asians” ဇာတျကားဟာ ၂၀၀၉ခုနှဈတုနျးကအကွီးအကယျြအောငျမွငျခဲ့တဲ့ “The Proposal” ဇာတျကားပွီးရငျ အအောငျမွငျဆုံး အခဈြဟာသဇာတျကားအဖွဈစံခြိနျတငျခဲ့တယျလို့တောငျသိရပါတယျ။
“The Proposal” ဇာတျကားဟာ Sandra Bullock နဲ့ Ryan Reynolds တို့ပါဝငျသရုပျဆောငျထားပွီး အဲ့ဒီအခြိနျတုနျးက အမရေိကနျမွောကျပိုငျးတဈခှငျကွညျ့ရှုမှုအမြားဆုံးဇာတျကားဖွဈခဲ့တာပါ။အခု “Crazy Rich Asians” ဟာလညျး ၉နှဈကြျောအတှငျး The Proposal ဇာတျကားပွီးရငျ ဒုတိယရုံဝငျမှုအမြားဆုံးဇာတျကားတဈကားဖွဈလာခဲ့ပါတယျ။
“Crazy Rich Asians”ဇာတျကားဟာ ပထမတဈပတျအတှငျးမှာတငျ ဒျေါလာ သနျး ၃၀ ဝငျငှရေရှိခဲ့ပွီး အခုလကျရှိအခြိနျထိ ဝငျငှေ ဒျေါလာ ၁၃ရသနျးကြျောရရှိနပေါတယျ။ဒီဇာတျကားမှာ အမရေိကနျမငျးသမီး Constance Wu နဲ့ မလေးရှားမငျးသား Henry Golding တို့ပါဝငျသရုပျဆောငျထားပွီးအာရှနဲ့အမရေိကနျတှဲဖကျရိုကျကူးတာဟာ ၁၉၉၃ The Joy Luck Club ဇာတျကားပွီးရငျ ဒါက ပထမဆုံးဇာတျကားဖွဈတယျလို့လညျးသိရပါတယျ။
ဇာတျလမျးပုံစံကတော့ ပရိသတျတှသေိထားပွီးဖွဈတဲ့အတိုငျး စင်ျကာပူနိုငျငံရဲ့ အခမျြးသာဆုံးမိသားစုကနပေေါကျဖှားလာတဲ့ကောငျလေးနဲ့ ခဈြသူဖွဈသှားတဲ့တရုတျအမရေိကနျအမြိုးသမီးလေးတို့အကွောငျး အဓိက ပုံဖျောရိုကျကူးထားတာပဲဖွဈပါတယျ။ပေါ့ပေါ့ပါးပါးအခဈြဟာသလေးကိုမှ ပရိသတျတှအေမွငျမရိုးအောငျ ဇာတျလမျးဇာတျကှကျဆနျးဆနျးလေးတှေ၊အရမျးမိုကျတဲ့အခမျးအနားအပွငျအဆငျတှနေဲ့ ဆှဲဆောငျသှားတဲ့ဇာတျကားလေးဖွဈသလို အခုခြိနျမှာတော့ ဒီဇာတျကားရဲ့ ဝငျငှဟော တရှိနျထိုးကို ထိုးတကျနတောပဲဖွဈပါတယျ။Congratulations! 🎉
ကလေးထိန်းရတာထက် ယောက်ျားထိန်းရတာက အိမ်ရှင်မတွေအတွက် စိတ်ဖိစီးမှု ပိုများစေ